Encrypt yako DNS traffic neDNSCrypt Proxy muUbuntu uye tarisa zvakanyanya zvakachengeteka | Kubva kuLinux
Encrypt yako DNS traffic neDNSCrypt Proxy muUbuntu uye tarisa zvakanyanya zvakachengeteka
Bhuku reManyuko | | Applications
DNSCrypt Proxy yakavhurika sosi yekushandisa iyo inovavarira ku encrypt iyo traffic yeDNS yekubatana kwedu kuti ifambe nekuchengeteka kukuru. Iyo purogiramu inonyora zvinokumbirwa zveDNS munharaunda imomo uye izvi zvinobva zvadzvanywa neanopa DNS, saka chero munhu anoedza kuvabata munzira (semuenzaniso, kuita kurwisa murume-pakati-pakati) uchave nenguva yakaoma kwazvo kuiwana.
Ikozvino pane yakanaka nhamba ye Vanopa DNS vanotsigirwa ne DNSCrypt Proxy, uye sezvo iri yemahara software, chero munhu ane ruzivo rwakakwana anogona kumisikidza yavo yavo DNS server uye kuigadzirisa pamwe nehurongwa. Nekudaro, nekutadza zvakatogadzirirwa kare kushandiswa ne OpenDNS.
Mune ino posvo ini ndiri kuenda kuzokuratidza yakapusa uye yakakosha kumisikidza mune iyo kesi ye Ubuntu uye zvigadzirwa. Vaya vanoda kumisikidzwa kwepamberi vanogona kubvunza iyo peji peji y yako yekuchengetera paGitHub.
1.4 Chete Ubuntu 14.04
Isu tinotanga nekuisa iyo package DNSCrypt Proxy kubva ku PPA repository inochengetwa naSergey «Shnatsel» Davidoff:
Nezvo iyo yatove kuiswa uye kumhanya, ikozvino isu tinogona chete kuudza iyo system kuti ishandise. Kune izvi isu tine nzira mbiri, yekutanga nekoni uye yechipiri mu graphic mode, sarudza iyo yaunoda zvakanyanya:
Isu tinobvisa iyo DNS iri kushandiswa izvozvi:
Isu tinogadzira nyowani /etc/resolv.conf faira ine chinyorwa chemavara:
Uye isu tinonamira iyi tambo kuti ipfuure iyo DNS traffic kuburikidza DNSCrypt:
Iye zvino isu tinochengetedza iyo faira kudzivirira Network maneja chinja icho:
Kuti uchinje zvakare gare gare, unofanira kutanga wabvisa kudzivirirwa nemurairo uyu:
Ipapo vanogona kudzokera kuno chengetedza kana kwete zvichienderana nezvavari kuda kuita.
Isu tinochengetedza shanduko uye nekuvhara mupepeti.
Tinodzvanya pane network network mujeri redu uye tinya Edza kubatana. Iye zvino tinosarudza kubatana kwatinoita uye tinya pairi Hora. Muhwindo rinovhura tinoenda kune iyo tebhu IPv4 marongero uye isu tichaona chakadai.
Isu tinogadzirisa sarudzo senge dzinoonekwa ipapo, kusarudza mukati Maitiro "Otomatiki kero chete (DHCP)", uye mu DNS maseva kuisa 127.0.0.1
Kunyangwe iwe waishandisa iyo Maitiro 1 s 2 nzira, rinotevera danho reboot Network maneja:
Tichaona kuti kubatana kwakatemwa uye kutangwazve. Kana zvese zvikafamba mushe, zvinenge zvichitove kushanda DNSCrypt Proxy. Kuti titarise isu tiri kuenda peji ino, uye kana mhedzisiro yacho iri yakanaka iwe unotigamuchira isu ku OpenDNS:
Zvikasadaro isu tinowana yekukanganisa meseji ichiti "Oops", kana haizotakure chero peji. Kuti tigadzirise isu tinongoshandura sevha 127.0.0.1 ye127.0.0.2 (kana imwewo) tobva tangazve Network maneja.
Chete Ubuntu 14.04
Iyo inochengetedza iyo PPA inoyambira kuti kune bug mukati Ubuntu 14.04 izvo zvinodzivirira kudzima michina kana DNSCrypt Proxy iri kushanda. Inotaridza kuti urikushanda pachigamba kuti ugadzirise, asi parizvino inogona kugadziriswa nekumhanyisa iyi mirairo:
Kana gare gare isu tinoda kurega kushandisa DNSCrypt ProxyChekutanga pane zvese, uchafanirwa kudzoreredza sarudzo dzekubatanidza kune zvavaive pakutanga.
Kana iwe wakashandisa iyo 1 nzira kwaizove kubvisa dziviriro kubva kufaira uye wozogonesa zvakare iyo yekare DNS nemutemo uyu:
Kana iwe wakashandisa iyo 2 nzira, kwaizove kuvhura iyo network yekumisikidza menyu zvakare uye mu Maitiro sarudza "otomatiki (DHCP)".
Chero zvazvingaitika, iwe uchafanirwa kutangazve gare gare Network maneja nemurairo wataurwa pamusoro, uye pakupedzisira uninstall DNSCrypt Proxy saizvozvo:
Usakanganwa zvakare kubvisa iyo PPA nekuenda kuSoftware Center> Hora> Imwe software.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Encrypt yako DNS traffic neDNSCrypt Proxy muUbuntu uye tarisa zvakanyanya zvakachengeteka
DAVHIDHI HENRY akadaro
Inoshanda zvakare yeOpensuse inogona kutsikisa rumwe ruzivo nezve iyi distro
Pindura kuna DAVIDI HENRY
Ruzhinji kutaura, iri [inenge] generic nzira iyo inoshanda kune [potse] chero kugoverwa (nzira 2 yeavo vanoshandisa Network Manager), asi zviri pachena kuti zvinyorwa zvinoshanduka uye zvimwe zvinhu senzira yekutanga nekutangazve masevhisi.
1. kutaura kwekutanga hakuonekwe kana chimwe chinhu nekuti kuverenga kunotangira pa2
2. Ndakazviona mumaposos blog asi muunganidzwa wakachena, uye sezvinei nyaya yacho haisisipo
1. Kutaurisa kwekutanga ndeye pingback.
2. Ndakanga ndazvionawo paPerseus blog kare kare, asi ikozvino zvinoita kunge zviri kuita kugadzirisa uye kudzima zvese zvayakapinda.
Ini ndakangozviedza, asi pasina budiriro.
Ini ndakaita zvakataurwa nedzidziso iyi, uye ipapo ndakanga ndapererwa neinternet, saka ndakadzokera kuDNS yandaive nayo uye zvese zvaive zvakanaka.
Wakarasikirwa nhanho, netsaona? Nekuti ini handigone kunzwisisa kuti ndingadai ndakapera sei internet kana ndikatevera iyi dzidziso kune iyo tsamba.
Ini ndinopindura: Ini ndanga ndichishandisa DNSmasq uye ndaifanirwa kuita zvishoma kumisikidza. Mukupedzisira ndakabvisa uye ndikatevera iyi dzidziso zvakare uye zvese zvakanaka. Thanks 😀
Ndiri kufara kuti wakakwanisa kuzvigadzirisa. 🙂
Mhoro! Unoziva handikwanise kuzviita kufamba Izvo zvinodaro sei kubva kuDNSmasq?
Kana ndiri kuseri kwemumwe munhu, zvinoshanda here?
Pindura kuna gaston
Nehunyanzvi, inofanirwa kushanda.
Ndiri kushandisa Privoxy uye kumisikidza kwayo kuvhara kushambadza, uye panguva imwechete ini ndinoshandisa DNScrypt proxy, uye handina kumbove nemadhirama. Zvichida imhaka yekuti kune ma proxies maviri ezvinangwa zvakasiyana, imwe yeDNS uye imwe yekutsvaga webhu.
Hukuru! .. .. chokwadi ndechekuti ini ndaisaziva nzira .. ..super iri nyore kugadzirisa muArchLinux futi .. ..ndatenda ..
Ndizvozvo, Arch zvakare zvakareruka; Ini handina kuzviisa pano nekuti ini handina matanho akagadziridzwa, asi kekupedzisira pandakaishandisa ipapo yaive:
Uye zvimwe zvese zvaive zvakafanana nezvazviri mudzidziso.
HURE: Iyo yakazara mirairo iri pano: Isa DNSCrypt Proxy pane Arch Linux
Ndine urombo, asi handikwanise kuzviita muArch ... ini ndinoisa, gonesa, tanga, shandisa nhanho 2 uye wotangazve Network Manager uye ndinogara ndichiwana iwo meseji: OPPSS ... Chingave chii?
Akapindura: Ini ndinoshandisa nzira 1 uye inondishandira. Ndatenda!
Ini ndaisa pano mirairo yekuzviita muArch Linux: https://blog.desdelinux.net/instalar-dnscrypt-proxy-en-arch-linux/
Inotaridzika zvakanaka kunyangwe ndisati ndayedza izvozvi.
Rudzi urwu rwechinhu runokanganisa kumhanya kwekubatana? Zvinononoka here?
Pane kupokana, inova inokurumidza nekuti iwe unotanga kushandisa OpenDNS DNS, iyo ine yakanyanya kukwirira yekumhanyisa kumhanya kupfuura yako ISP. Kunze kwekunge iwe uchibatsirwa kubva kune mamwe maitiro eOpenDNS sekudzivirirwa kubva kune phishing uye zvichingodaro. 😉
Kusvika parizvino ndakashandisa maSeva eGoogle, ini handizive kuti achachengetedzeka zvakadii asi anomhanya
Ehe, ini ndakavashandisawo, kunyangwe ndichifarira ari maOverDNS zvirinani nekuti zvinondipa kunzwa kwekuti vanokurumidza uye vanogadzira mashoma zvikanganiso; Kunyangwe iwo ari iwo chete maonerwo angu, ini handina kuita bvunzo kana chero chinhu kuti zviongorore. 😛
Ichokwadi, ndakaiyedza pane imwe komputa yangu uye zvinoita "sekuti inokurumidza.
Chinhu chimwe chandisinganzwisise:
Nei uchifanira kuisa dnscrypt-proxy? Ndiri kureva, hazvaizokwana here kushandura iyo DNS yatinayo mukumisikidzwa kwenetiweki kuti ive OpenDNS DNS?
Izvi ndo zvandinoita kushandisa Google DNS: Ini ndinongo chinja iro ruzivo mukombuta kumisikidza, ini handidi kuisa chero chinhu kana kumhanyisa imwe daemon ...
Ndicho chete chakashata chandinoona.
MuOpenDNS izvi zvinogona zvakare kuitwa, asi izvo zvandinotsanangura hazvina kufanana. Paunogadzira iyo DNS nenzira iyi, iyo mibvunzo inoitwa nenzira dziri nyore, pasina chero rudzi rwekunyorera kana chengetedzo. Nezvo iwe unowedzera kunyorera uye kusimbisa. Ndokunge, neDNSCrypt Proxy yauri kushandisa OpenDNS DNS Y encryption tekinoroji, ese ari maviri, kwete yekutanga chete.
Ndinonzwisisa, ndatenda nemhinduro yako.
PaInternet ivo vanokurudzira kushandiswa kweUkusungwa pamwe chete ne dnscrypt asi ini handizive chaizvo zvinoita chirongwa ichocho.
Sezvo ini ndinonzwisisa iri DNS server iyo iwe yaunowisa munharaunda; Pfungwa, inofanirwa kuwedzera yako kumhanya zvakanyanya nekuti inogadzira cache uye DNSCrypt inoita zvikumbiro ipapo panzvimbo pekuzvitumira kuOpenDNS, asi zvimwe kunze kweizvozvo handina kunyatsoongorora kuti ndione chaizvo maitiro acho.
Ok, ndatenda neruzivo.
Hmm ini ndinopokana zvakanyanya izvi zvichashanda mukambani panoshandiswa DNS yemuno nemaSeva eProxy. Zvisinei ndichaedza kuona kuti sei.
Manu lopez akadaro
Yakakura, inoshanda 100%.
Pindura Manu Lopez
Zvakandishandira! : ') Ndatenda zvikuru nguva refu yapfuura ndanga ndichitsvaga mashandisiro aungaita proxy kana vpn (yemahara) ini ndichiri kushaya iyo vpn yandisina kuwana yandaigona kuisa pane yangu Ubuntu
Ini handizive kuti nei waitsvaga proxy, asi dai kwaive kushandura IP yako, izvi hazvikubatsire, nekuti zvinongobata kunyorera kwekukumbira pakati pemuchina wako uye mupi weDNS. IP yako inoramba yakangofanana uye nezve maseva zvese zvinoramba zvakafanana.
Kana ndikaona mushure mekunge ndaita bvunzo, iko kuchinja IP kero, nekunyorera iko kwatova kumberi mukutsvaga chengetedzo. Iwe unoziva nezve kutumira mune blog uko kunotsanangurwa kwakawanda kana zvishoma nenzira yakapusa mashandisiro aungaita vpn muUbuntu? Pandakaverenga uye ini ndakakwanisa kuongorora pane kukanganisa kunodzivirira kuisa iyo faira iyo ine zvigadziriso zvatogadzirwa kuitira kuti zvinhu zvinyanye kuomarara, handina kukwanisa kushandisa imwe. Pandaive ndichishandisa windows ndaive neimwe inonzi hotspotshield uye iyo haina linux rutsigiro kana zvirinani handizive kuishandisa pano. Ndatenda nemhinduro kune chero munhu anogona uye anoda kundibatsira.
Kuti ushandise VPN muUbuntu unogona kushandisa OpenVPN muNetwork Manager kana mutaraini nekungonyora "openvpn -config file", uko faira iri iro faira rekumisikidza iro mupi wako raachakupa, rinokumbirawo iwe mushandisi uye pasa kuti upinde. Semuenzaniso, kune yemahara vpnbook sevhisi. Ehe, iwe unofanirwa kuisa openvpn kutanga kana iwe usina iyo yakaiswa.
Thanks Keiller. Bvisa DNSCrypt Proxy sekureva kwenyaya yacho, ini ndakodhaunura openvpn, mafaira ekumisikidza uye ini ndakapinda kuburikidza neiyo terminal neiyo yekuraira, ini ndakaisa zita rekushandisa uye password uye zvinondipa iyi kukanganisa: ERROR: Haikwanise ioctl TUNSETIFF tun1: Kushanda hakubvumidzwe (errno = 1); Kubuda nekuda kwekukanganisa kunouraya
Unoziva here zvandingaite nezvazvo?
nameserver 127.0.0.1 Iyo yasara yakadai, inongoteedzerwa nekunamirwa
Izvo hazvindipe ini handikwanise kuzvishandisa: C
Verenga mirairo zvakanaka:
Zvikasadaro isu tinowana yekukanganisa meseji ichiti "Oops", kana haizotakure chero peji. Kuti tizvigadzirise tinongoshandura sevha 127.0.0.1 kuenda ku127.0.0.2 (kana imwewo) tobva tangazve Network Manager zvakare.
Zvichida zvakanakisa kana uchizviita nenzira yeMhando 2.
Izvi zvinodzivirira yangu email kubva kubiwa pane yeruzhinji wifi?
Iyo inokubatsira iwe kurwisa kwemurume-mukati-wepakati, asi chengetedzo yakanakisa yeruzhinji Wi-Fi iVPN.
Pachivande Proxies akadaro
Mhinduro yeiyi kufamba nenzira dzakavanzika uye isingazivikanwe proxies, izvo zvisingachengetedze mushandisi matanda uye, kana zvichibvira, yekuzvipira kushandiswa.
Izvo zvakachipa uye iwe unovimbisa iyo yega yakavanzika yekuvhura kwako.
Pindura kune Akavanzika Proxies
Izvo hazvishande pamwe VPN. Zvinonyadzisa
Kwete, nekuti kana uchitsvaga paVPN urikushandisa iyo DNS yeVPN pachayo pachinzvimbo cheiyo yakagadzirirwa munharaunda.
Mukuru ndinokutendai zvakanyanya zvinoita kuti ndinzwe ndakachengeteka zvakanyanya pandinosangana ne wifis pasina mapassword
Mario zamora akadaro
Mhoroi vakomana, ini ndatevera iyo dzidziso kune iyo tsamba uye ikozvino ini handina Internet sezvo ini ndinodzosera dambudziko nekuti munzira yakatarwa iwe haudi proxy dnsscript isina yakadaro. Ndibatsire ndapota handina internet.
Pindura kuna Mario zamora
Hauna kutevera dzidziso kune iyo tsamba. Iwe hausi pamhepo nekuti wakabvisa DNSCrypt pasina kudzosera shanduko kutanga. Verenga iyo uninstall mirairo zvakare.
Ini ndakatevera iyo dzidziso sezvayaifanira. Shandisa nzira 1 pamwe nekubvisa kwayo kwakaringana. Asi kana ichinge ichimutswa inoramba iri muchiitiko. Chero mazano?
Ngatione, ngatiendei pamusoro pematanho ekubvisa ...
Chengetedza iyo faira:
Dzosera iyo yekare DNS:
Dzorerazve Network Manager:
Bvisa DNSCrypt Proxy:
Ndeupi murairo wakanamatira?
Mario Zamora muchengeti wemufananidzo akadaro
sudo apt-tora autoremove -purge dnscrypt-proxy
Kubviswa kwacho kunotanga uye hakuzomboperi.
Dashi inosara pamusoro pemurairo, purge zvinongofanira kuenda nema hyphens maviri pakutanga, seichi:
Bvunzo kana izvozvo zvinogadzirisa dambudziko rako. Chero nzira, kana iwe ukatevera nhanho dziri pamusoro iwe unofanirwa kuve uri online zvisinei kuti iwo wekupedzisira rairo unoshanda kana kwete.
Roberto Gonsalez akadaro
Yakanaka kwazvo posvo yakandibatsira zvakanyanya. Zvakanaka !!!
Pindura kuna Roberto Gonsalez
Dzidziso inonakidza Manuel.
Ini ndazviisa mukuita uye kubatana kwangu kuri kuenda kukuru.
Mhoro shamwari shamwari kubva desdelinux Ndinoda kubvunza mubvunzo pandinoyedza kuita iyo yekuisirwa iine iyo mushure mekuwedzera iyo repositori uye kugadzirisa ini ndinoisa Sudo apt-tora kuisa dnscrypt-proxy asi inondiudza:
E: Iyo dnscrypt-proxy package haigone kuwanikwa ini ndine ubuntu 14.04 handizive kuti nei izvi zvichiitika zvichibatsira
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri 🙁
Ini ndaigona kuzviita zvirinyore muArch / Antergos asi muDebian / Jessie kubva padanho rekutanga zvinokundikana, handizive kana zvisingaenderane naDebian:
keos @ kaos: ~ $ su
midzi @ kaos: / home / keos # wedzera-apt-repository ppa: shnatsel / dnscrypt
bash: wedzera-apt-repository: rairo haina kuwanikwa
midzi @ kaos: / home / keos #
Mhoro! Iyo saiti yakanaka kwazvo uye ini ndaida kukubvunza iwe:
Ini ndinoteedzera ese mirairo asi ini handikwanise kuitora kuti ishandise iyo DNS yatakachinja mu resolutionv.conf (127.0.0.1 kana 127.0.0.2). Saka ini ndakasara ndisina internet yekuwana. Ini ndinoshandisa DEBIAN uye WICD panzvimbo yeNetwork Manager.
Na "tsvaga / -zita dnscrypt-proxy" Ndinoona kuti chirongwa ichi chakaisirwa kwachinofanirwa kuve (/ usr / local / sbin uye / usr / local / share /).
Ne «ps aux | grep dnscrypt-proxy »inondikanda inotevera chinobuda:
mudzi 6346 0.0 0.0 2808 672? SLs 09: 45 0: 00 dnscrypt-proxy -inzvimbo-kero = 127.0.0.1 - daemonize -resolver-kero = 176.10.127.43: 443 -mupi-wezita = 2.dnscrypt-cert.ns3.ca.dns.opennic.glue –Provider-key = 1C19: 7933: 1BE8: 23CC: CF08: 9A79: 0693: 7E5C: 3410: 2A56: AC7F: 6270: E046: 25B2: EDDB: 04E3
Ini handinzwisisi pandiri kutadza. Ndakaverenga iyo - rubatsiro asi handina kuwana kudzoka. Kubva ndatotenda zvikuru kwazvo.
Yakakwana paLubuntu 16.04, ndinokutendai zvikuru nekugovana ruzivo.
Mhoro mumwe munhu pano anogona kundibatsira ne vpn kana proxy yekuita yakabhadharwa kuongororwa kweunited states ndapota
Isa DNSCrypt Proxy pane Arch Linux
Chiitiko chine Ghost I: Kuisa Ghost paVPS neNginx